‘दाइ’हरूको डर – erupse.com
त्यो दिन कुलपूजा थियो।
स्कुलबाट सीधै घर आउन पर्दैनथ्यो। खेल्दै खेल्दै कुलदेवताको थानसम्म पुग्ने। टपरीमा खिर खाने र खेल्दै खेल्दै घर फर्किने। खिर पनि खान पाइने र घरमा ढिलो जान पाइने भएपछि मलाई कुलपूजा हप्तैपिच्छे भइदिए पनि हुन्थ्यो जस्तो लागिरहन्थ्यो। कुलपूजाको प्रसाद खान जाने हो भनेपछि स्कुलमा छुट्टी मिलिजान्थ्यो।
त्यो दिन पनि म कुलपूजाको खीर खाएर खेल्दै खेल्दै घर पुगेँ। आमाले बुनिदिएको झोला किताबसहित पिँढीमा हुत्याएँ। कपडा फेरेँ र खेल्न दौडिएँ।
धेरै टाढा नपुग्दै दाइले जोडले बोलायो।
मेरा पाइला घचक्क रोकिए।
आज फर्किएर हेर्छु, त्यो दिनको घटनाले मलाई कति धेरै वर्षसम्म रोकेछ। कति धेरै पटक रोकेछ।
त्यसको ८ वर्षपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट तुफानको बेगमा आएको बाइक सोल्टीमोडनेर घचक्क रोकियो।
डेरा मनमती खोलाको किनारमै थियो। नाममात्रैको हो, मनमती। सधैँ ढल बगेको देखिन्थ्यो। ह्वास्सै गन्हाउँथ्यो। त्यो रात भने ढलभन्दा धेरै ती ‘दाइ’ को नियत गन्हायो मलाई । साँच्चै हो, त्यतिखेर मैले मनमतीबाट आउने गन्ध थाहा पाइनँ।
गोडा थरथरी काँपे। हातले पनि केही भर पाएन। शरीरका अंग सन्तुलित हुन मन सन्तुलित हुन पर्ने रहेछ। जुन मैले गुमाइसकेको थिए। सबैभन्दा ठूलो हिनताबोध विश्वास गुमेको बेला हुँदो रैछ। त्यो पनि मैले त्यसैबेला थाह पाएँ।
आँखा मिच्दै उठेकी आमाले सोधिन्- आउन अझै एक घन्टा लाउँच भन्तिस् त!
म बोल्न सकिनँ। बोलिनँ भनेर मन दुखाइन् होला, घुप्लुक्कै सुतिन्। भाइ निदाइसकेको छ। म पनि मेरै बिस्तारामा छिरेँ। निदाउने भने कुनै छाँटकाँट आएन। मन पिरमा हुँदा त पेटले खाना पनि नखोज्दो रैछ। बरू मनमै आगो लागेर पग्लिएका पीडाहरूले निकास खोज्दा रैछन्। त्यो साँघुरो कोठामा रूने माहौल नै थिएन। हामीलाई देखपाल गर्न गाउँ छोडेर काठमाडौं आएकी आमालाई सबै कुरा भन्छु भनेर रातभरिमा दसौं चोटी सानो स्वरमा बोलाएँ, आमा…।
अनि हरेक पटक म रोकिएँ।
उही कुलपूजाको दिनबाट सुरू भएको भयले मेरा कुरा आमालाई भन्नबाट रोक्यो। सुरूसुरूमा बोलाउँदा हूँ…भनेर जवाफ फर्काउने आमा पनि कतिखेर निदाइसकिछन्। म भने पढेलेखेका, भोलि पत्रिकाको फ्रन्टपेजमै बाइलाइन आउने सम्भावना भएका ती दाइले निचोरेका छाती दुखेर रोएँ, बिस्तारै। छातीभन्दा धेरै निचोरिएको मन दुखेर रोएँ अझै बिस्तारै। पत्रकारिताको सुरूआतीमा लागेको यो जोडको करेन्ट सम्झेर रोएँ। यस्ता नरपिचास दाइहरू म हुर्केको गाउँ, मैले पढेको स्कुलमात्रै होइन, यो सभ्य र भव्य शहरमा पनि हुने रहेछन् भन्ने सम्झेर रोएँ।
त्यसपछिका कैयौं रात ती दाइको कर्तुतबारे कतै भन्न नसकेको खिन्नताको ऐंठनले मलाई थिचिरह्यो। यही घटनापछि हो राजनीतिक पत्रकारितामै करियर बनाउँछु भनेर कसिएका मेरा पाइला धरमराएका।
त्यसपछिको धेरै समय म सात दलको बैठक ढुक्न गइनँ। पत्रकारिता काम लाग्दो चिज हो या होइन भन्ने विरोधाभाषमा धेरै महिना बिते। न ती ‘दाइ’बारे कतै भन्न सकेँ न आफैंले रोजेको पत्रकारिताबाट टाढिन सकेँ।
समय बित्दै गयो। राजनीतिप्रतिको मेरो चाख भने घटेन। सायद त्यही चाख देखेर होला मेरा सम्पादकले मलाई मधेस आन्दोलनको रिपोर्टिङ गर्न पठाउने भए, नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरूको टोलीसित। त्यो जम्बो टोलीमा मबाहेक सबै पुरूष थिए। कलंकीबाट गाडी चढ्नै लाग्दा टिममा पुरूषैपुरूष देखेपछि म आत्तिएँ।
यसो हेरेँ, ती सबै पुरूष पात्रको अनुहारमा फेरि उनै ‘दाइ’ देखेँ। ठूलो संशयसहित तीन दिनसम्म नागरिक आन्दोलनका ती अगुवाहरूसँग मधेस डुलेर आएपछि मलाई लाग्यो- पुरूष असल पनि हुने रहेछन्।
यही भरोसाले राजनीतिक रिपोर्टिङप्रतिको मेरो मुर्छित लगाव फेरि चलमलाउन थाल्यो।
रेडियोमा काम गर्ने अधिकाशं महिलाले महिला बीट नै रोजिरहेका बेला मैले पुनर्स्र्थापित संसदमा रिपोर्टिङ गर्छु भनेँ। रिपोर्टिङका लागि तत्कालीन माओवादी पार्टी छानेँ। अफिसले मलाई शंकासहितको अनुमति दियो।
राजनीतिक घट्ना परिघट्नाको परिचर्चा भइरहने घरमा हुर्केकी थिएँ। त्यसैले पनि होला मलाई संसदमा हुने बहस रोचक लाग्थे। भर्खरै सशस्त्र युद्ध छोडेर आएका माओवादी नेताहरूका कुरा सुन्न लालायीत हुन्थेँ। उनीहरू हेर्दा साना र सुरिला थिए। कुरा भने ठूल्ठूला परिवर्तनका गरिरहेका भेटिन्थे। त्यसैले सकेसम्म संसद र कतिपय समितिका रिपोर्टिङ नछुटाइ गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरह्यो। बरू प्लस टुका कक्षाहरू ‘बंक’ गरेँ तर अहँ मलाई व्यवस्थापिका संसदको रिपोर्टिङ छोड्न मन लागेन।
मलाई थाह थिएन, संसदीय मामिलामा रिपोर्टिङ गर्ने अर्का पत्रकार ‘दाइ’ मलाई पनि छोड्न चाँहदैनथे। म पुनर्स्थापित संसद सचिवालयले पत्रकारका लागि बनाइदिएको मिडिया सेन्टर जाने बाटोमा थिएँ। त्यहाँनिर सानो गल्लीजस्तो छ। ती दाइ मेरो पछिपछि आए, पछाडिबाट चपक्कै अंगालो हाले। एकै हातले लपेटे र मसित ठेस्सिए। के भइरहेको छ भन्ने मेसो पाइनसक्दै ती दाइको जिब्रो मेरो कानवरीपरि नाच्यो। म दिगमिगाए।
मैले फेरि कुलपूजाको त्यो दिन सम्झिएँ।
अचानक ज्वरो आएझैँ भयो, त्यो दिनको रिपोर्टिङ गर्नै सकिनँ। म फर्किएँ, कुन तोडमा बबरमहल पुगेँ, कुन तोडमा कलंकीको टेम्पु चढेँ अहिले याद गर्न खोज्दा पनि सक्दिनँ। संयोग पनि कस्तो, सो टेम्पुमा मैले नै काम गर्ने नेपाल एफएममा मेरै आवाजको महिला पुरूष बराबरी हुन भन्ने आशयको चेतनामूलक सन्देश बज्यो। रेडियोले मलाई नै गिज्याएजस्तो। मनमनै भनेँ- संसार ढोंगी छ।
आजको अवस्थामा हुन्थेँ भने म जुरूक्क उठ्थेँ र भन्थेँ होला- संसदीय पत्रकारिता पुरूषको एकल कब्जाबाट मुक्त भइसक्यो। मुख सम्हालेर बोल। त्यो बेला भने दुई ‘दाइ’ हरूको को बोलीले म नै लज्जित भएँ। बारम्बार आफैं साइड लागेँ।
मैले पछि अरूसँग पनि सोधेँ, उनीहरूको बोल्ने शैलीबारे। थाहा पाएँ, केटीमान्छे वरिपरि देखेपछि उनीहरू त्यसरी बोल्दा रहेछन्। केटी हुनुको बाध्यताले फेरि पिरोलिएँ।
छलफल गर्न बनाएको विषयको फाइल बोकेँ। त्योभन्दा गह्रुंगो मन बोकेर उनको कार्यकक्षबाट बाहिरिएँ। मलाई त्यस्ता मान्छेहरूसँग बोल्ने भन्दा पनि भाग्ने बानी जो परिसकेको थियो।
यो बीचमा समय धेरै बग्यो।
अहिले म छोरीसँग बस्छु। केही समयअघि उसले अचानक प्रश्न गरी, ‘मम्मी अरूले फेस, चेष्ट र पिसाब फेर्ने ठाउँमा छोयो भने मलाई त्यसो नगर्नुस् भन्नुपर्छ हो?’
आफ्ना मिसहरूभन्दा मम्मी जान्ने हुनुहुन्छ भन्ठान्ने छोरीले उसलाई स्कुलमा सिकाइएको कुरा मसँग ‘भेरिफिकेसन’ गरेकी हो भन्ने मैले बुझेँ। मैले हो भने। थपें, ‘कसैले त्यसो गर्‍यो भने नछुनुस् भन्नपर्छ, अनि घरमा मम्मी र स्कुलमा मिसलाई पनि भन्नुपर्छ।
मलाई आफूले भोगेका त्यस्ता हिंसा आमासँग साट्न नपाएकोमा सबैभन्दा ठूलो दु:ख छ। मेरा सम्पादकहरूसँगै भन्थेँ भने पनि कुनै न कुनै बाटो पाउँथेँ होला। मलाई नै आक्षेप आउला भन्ने डरका कारण भनिनँ। अनि यस्ता खलपात्रहरूसँग म बारम्बार ठोक्किन पुगेँ।
पत्रकारिताको यो यात्रामा मैले हजारौंसँग संगत गरेँ। सयौँ पत्रकारसँग सम्कर्पमै हुन्छु। तीमध्ये नियत खराब भएका १८ जना नै समग्र पत्रकारिता क्षेत्र होइन।
तर ममाथि जुन-जुन ठाउँमा प्रहार भएको छ, ती ठाउँमा पनि यस्ता हर्कत हुन्छन् भनेर कल्पना गर्न सकिन्छ र? भन्नुस् त- नाम चलेको सञ्चारमाध्यमको समाचार सम्पादकको कार्यकक्ष, ठूला राजनीतिक दलको कार्यालय, संसद भवन सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको बाहिरी भाग सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ होइनन्? तर पढेलेखेका पत्रकार दाइहरूले त सधैँभरि प्रहार गरिहे नि!
झन्डै १२ वर्षअगाडिको त्यो सोल्टीमोड घटनादेखि करिब डेढ वर्षअघि अफिसियल कुरा गर्न बोलाएर हतार-हतार कार्यकक्षको चुकुल लगाउने पत्रकार ‘दाइ’हरूको हर्कत सम्झेर म कहिलेकाहीँ अवाक हुन्छु।
यो १२ वर्षे पत्रकारिता यात्रामा मलाई जानाजान विक्षिप्त बनाउने पत्रकार ‘दाइ’हरूको संख्या १८ पुगेछ। मैले १८ औं पत्रकारलाई मात्रै मुखभरिको जवाफ दिन सकेँ। अब आइन्दा त्यसो नगर्न चेतावनी दिएँ र कोठाबाट बाहिरिएँ।
त्यसअघिका १७ सामू त म हमेसा झुकेरै बसेँ। निरिह भइरहेँ। कति नियतहरू थाहा पाएरै पनि नपाएझैं गरिदिएँ। कति छुवाइहरू झुक्किएर होला भन्ठानिदिएँ।
आज म त्यस्ता छुवाइ खराब हुन् भनेर छोरीलाई सिकाउँदैछु।
मलाई यति लामो समयसम्म के रोक्यो होला? केले निरीह बनायो होला?
सायद त्यो कुल देवताको पूजाको दिनले मेरो शक्ति छिन्यो होला।
आफन्तले, मेरा नजिककाले सहयोग गर्छन् भन्ने भरोसा उठ्यो होला। सायद म त्यही दिनदेखि नितान्त एक्ली भएँ होला। आफैंसँग खुम्चिन सिकेँ होला।
त्यो दिन दाइले कराउदा रोकिएका पाइला दोस्रो पटक उसले कराएपछि घरतिरै फनक्क घुमे।
म बिस्तारै घरभित्र छिरेँ। उसले सकेको बल निकालेर टाउकोमा बजार्‍यो। मैले पिटाइको कारण बुझ्न सकिनँ। आँसु मिसिएका आँखाले आमाको सहारा खोजेँ। उनीतिर पुलुक्क हेरेँ। उनी पनि उसैगरि रिसाएकी थिइन्।
हिक्कहिक्क गर्दै दाइलाई सोधेँ- किन पिटिस्?
उसले उल्टो सोध्यो- फलानोलाई किन ढुंगाले हानिस्?
दाइले भनेको त्यो ‘फलानो’ले खेल्दाखेल्दै मेरो मिड्डी तानिदिएको थियो। मेरो कट्टु फुकालिदिएको थियो। त्यसपछि मैले उसलाई ढुंगाले हानेको थिएँ। ढुंगाले उसको खुट्टामा चोट लागेको थियो। मुर्मुरिएर हिँडेको उसले आफ्नी आमालाई के बयान दियो कुन्नी, मभन्दा पहिले घरमा पुगेका उनीहरूले मेरी आमा र दाइलाई के-के बयान दिएछन्। उनीहरूले मलाई सुनाएनन्। मैले भनेको कुरा उनीहरूले पत्याएनन्।
नौ वर्षकी त्यो बच्चीले गरेको प्रतिवाद जायज थियो भनेर कसैले भनिदिएन। बरू अब आइन्दा कसैलाई पनि हात नहालेस् भनेर बाचा कबुल गराइयो। त्यही क्रममा आमाले कैयौँ गाली गरिन्, दाइले अरू दुई चार झापड थप्यो। त्यो नौ वर्षकी बच्ची सायद त्यही दिन आफूमाथि खसेको हिंसाको आकाश आफूलेमात्रै थाम्नुपर्छ भन्नेमा पुगी। त्यसको भागिदार आफैं हो भन्ने निष्कर्षमा पुगी।
अनि म रक्षात्मक बन्दै गइरहेँ। ‘दाइ’हरूका कर्तुतको लामो समयसम्म प्रतिवाद गर्न नसक्नुको कारण पनि सायद त्यही थियो।
अब भने म त्यसबाट बाहिर आउने क्रममा छु। यस्तो हिंसा भावी पुस्तालाई हुन सक्छ भन्नेमा सचेत छु। त्यसकारण छोरीलाई सुन्छु, उसले भनेका हर कुरा पत्याइदिन्छु। मेरी छोरीले दु:ख बिसाउने सबैभन्दा ठूलो चौतारी म नै बन्न सकूँ भन्नेछ ताकि उसले भरपुर आत्मविश्वास पाओस्। सेतोपाटीबाट
बुधबार, साउन १, २०७६ मा प्रकाशित